Dainik Samaj | सर्वाेच्च अदालतले आज नेकपा पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दै ! - Dainik Samaj सर्वाेच्च अदालतले आज नेकपा पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दै ! - Dainik Samaj
सर्वाेच्च अदालतले आज नेकपा पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दै !
काठमाडौं । नेकपा बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा दिने वा नदिने बारेमा आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिए मात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढनेछ ।
गएको फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँताउने फैसला सुनाएकोे थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमा फैसलाले संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको उल्लेख छ । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । नेकपा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको दलसँग नाम मिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटको फैसला गर्दै नेकपा बदर गरेर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताइदियो । रिट निवेदकको माग विपरीत सर्वोच्चले पार्टी एकता बदर गरिदिएकोमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन।